घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » गेस्टपोस्ट » कहिले सम्म ढिलो भुक्तानी तपाइँको क्रेडिट स्कोर लाई प्रभावित गर्दछ?
6 मिनेट पढ्ने
संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबै स्कोरिंग प्रणाली Experian, Equifax, र TransUnion बाट आधिकारिक रिपोर्ट मा विस्तृत छ जो तपाइँको क्रेडिट इतिहास, मा आधारित छन्।
छुटेको वा ढिलो भुक्तानी सबैभन्दा हानिकारक घटनाहरु हुन्।
उनीहरु गणना को एक तिहाई मा परिभाषित (FICO को लागी 35% र VantageScore को लागी 40%)।
प्रभाव कती चाँडो तपाइँ गल्तीहरु लाई सच्याउन मा निर्भर गर्दछ। यहाँ आधारभूत छन्।
ढिलो भुक्तानी ३० दिनमा अपराधी बन्छ। यो जब यो आधिकारिक रूपमा रिपोर्ट गरिनु पर्छ। त्यस्ता वस्तुहरु 30 बर्ष को लागी रेकर्ड मा रहन्छन्, जब सम्म उनीहरु स्वाभाविक रूप देखि गायब हुन्छन्। ब्यूरो प्रमाणित जानकारी हटाउन छैन, र त्यहाँ कुनै workarounds छन्। यदि अपमानजनक तपाइँको आफ्नै गल्ती हो, संगीत को सामना गर्नुहोस्: त्यहाँ केहि छैन तपाइँ यसलाई मेटाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँको वित्तीय समस्याहरु एक अध्याय7दिवालियापन मा परिणाम, यो रेकर्ड र १० बर्ष को लागी स्कोर धूमिल हुनेछ।
जब यो मेट्न सकिन्छ
ढिलो भुक्तानी समाप्ति सम्म गायब हुँदैन। यो फरक पर्दैन कि तपाइँ कति ढिलो हुनुहुन्छ - 30 दिन वा 60 दिन। कुनै पनि अवस्थामा, जानकारी7बर्ष को लागी तपाइँको स्थिति लाई प्रभावित गर्न को लागी जारी रहनेछ। तर, उपभोक्ताले गर्न सक्छन् क्रेडिट रिपोर्ट बाट ढिलो भुक्तानी हटाउनुहोस् यदि तिनीहरू झूटा हुन्। रिपोर्टिंग त्रुटिहरु धेरै सामान्य छन्, जसको कारण मरम्मत उद्योग फस्टाउँदै छ। राष्ट्रव्यापी एजेन्सीहरु को कुनै पनि यस्तो गल्ती गर्न सक्छन्।
एक कम्पनी जस्तै लेक्सिंगटन कानून त्रुटिहरु पत्ता लगाउन सक्छन्, प्रमाण प्रमाणित गर्न उनीहरुलाई प्रमाणित गर्न, र औपचारिक विवाद खोल्न। मर्मत फर्महरु तपाइँको तर्फ बाट सबै काम गर्दछ, जबकि तपाइँ पोर्टल वा अनुप्रयोगहरु को माध्यम बाट प्रगति को निगरानी। एकै समयमा, तपाइँ एक नि: शुल्क, तपाइँको आफ्नै मा विवाद शुरू गर्ने अधिकार छ।
यो एक माग र समय उपभोग गर्ने प्रक्रिया हो, जसलाई उपभोक्ता creditण कानून को ज्ञान को आवश्यकता छ। अचम्मको कुरा, लाखौं अमेरिकनहरु छनौट गर्न को लागी आफ्नो स्कोर उनीहरुको लागि मर्मत गरिएको छ। संघीय व्यापार आयोग के अनुसार, 20% उपभोक्ताहरू अन्यायपूर्ण स्कोर सामना।
स्कोर मा प्रभाव
एक पटक एक भुक्तानी संग ढिलो भएकोले तपाइँ आशा गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा बढी परिणामस्वरूप हो। सौभाग्य देखि, प्रभाव समय संगै फीका हुन्छ, विशेष गरी यदि त्यहाँ तपाइँको रेकर्ड मा मात्र एक गलत छ। यदि एक ढिलाइ हुन्छ, समय मा सबै पछिको भुक्तानी गरेर क्षति प्रतिकार। यो बिल्कुल महत्वपूर्ण छ।
ध्यान दिनुहोस् कि एक ढिलो बिल रिपोर्ट गरीएको छैन जब सम्म यो 30 दिन अतीत को कारण हो। यो उपाय गर्न एउटा विन्डो दिन्छ। यदि तपाइँ छिटो भन्दा छिटो भुक्तानी गर्नुहुन्छ, यो तपाइँको वित्तीय अतीत मा शामिल हुनेछैन। पहिलो 30 दिन पछि, त्रुटि रेकर्ड र स्कोर प्रभावित गर्न ग्यारेन्टी छ। परिणामहरु 180 अंक को एक हानि को रूप मा गम्भीर हुन सक्छ! यहाँ केहि अन्य जटिलताहरु छन्।
30 ३० दिन भन्दा कम ढिलाइ
यो सबै भन्दा राम्रो मामला परिदृश्य हो। यस्तो ढिलाइ रिपोर्ट गरिएको छैन। जब तपाइँ अझै पनी जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ, क्षति कम हुन्छ।
-30 59-XNUMX दिन को एक ढिलाइ
पहिलो ३० दिन पछि, अपमानजनक तपाइँको रेकर्ड मा देखिन्छ। एकै समयमा, तपाइँ अझै पनी, भुक्तानी गर्नै पर्छ। यो सकेसम्म चाँडो गर्नुहोस्।
+०+ दिन को एक ढिलाइ
यदि तपाइँ एक पंक्ति मा दुई देय मिति छुटाउनुहुन्छ, तपाइँको रिपोर्ट मा एक विशेष सूचना शामिल हुनेछ। यो तपाइँको स्थिति मा क्षति exacerbates, त्यसैले यो गहिरो plunges। अधिक भुक्तानी तपाइँ छोड्नुहुन्छ - अधिक सूचनाहरु थपिएका छन्, र अधिक गम्भीर असरहरु। अन्ततः, debtण कलेक्टरहरु मा पारित गरिनेछ, जबकि मूल nderणदाता खाता बन्द हुनेछ।
तपाइँ देख्न सक्नुहुन्छ, हराएको भुक्तानी सबैभन्दा खराब गल्ती तपाइँ गर्न सक्नुहुन्छ। केहि कार्ड जारीकर्ताहरु तपाइँ ढिलो भुक्तानी को लागी सजाय दिनुहुन्न (कुनै शुल्क लगाउनुहुन्न), तर यो लापरवाही को औचित्य छैन। गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारले तपाइँको स्कोर जोखिममा राख्छ।
यो सूचक मात्र भविष्य उधारो प्रभावित गर्दैन। यो पनि बीमाकर्ताहरु, भर्तीकर्ताहरु, र घरमालिकहरु द्वारा जाँच गरीन्छ। ढिलाइ को पहिलो 30 दिन पछि, कार्ड जारीकर्ता अझै पनी तपाइँको उल्ल report्घन रिपोर्ट हुनेछ। निम्न सुझावहरु तपाइँ भुक्तानी छोड्न बाट बच्न मद्दत गर्नेछ।
1. स्वतः भुक्तानी विकल्प
स्वचालित भुक्तानी यस्तो गल्तीहरु लाई रोक्न को लागी सजिलो तरीका हो। सेटअप प्रक्रिया १ मिनेट लाग्छ, र यो मन को शान्ति को ग्यारेन्टी गर्दछ। आवश्यकताहरु अनुसार तपाइँको भुक्तानी अनुकूलित गर्नुहोस्, र प्रणाली बाकी संभाल्न दिनुहोस्। तपाइँ सबै गर्न को लागी सुनिश्चित गर्नुहोस् ब्यालेन्स भुक्तानी को माध्यम बाट जाने को लागी पर्याप्त छ।
2. भुक्तानी अनुस्मारक
सबैलाई स्वचालित शुल्क संग सहज छैन। यसको सट्टा, तपाइँ पात्रो अनुस्मारक बनाउन वा अलर्ट सेट अप गर्न सक्नुहुन्छ। यो पाठ र ईमेल शामिल हुन सक्छ। प्रणालीहरु तपाइँलाई सूचित गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाइँको कथन प्राप्त हुन्छ, जब दिनहरुको एक विशेष संख्या देय मिति भन्दा पहिले छोडिएको छ, जब भुक्तानी पोस्ट, आदि यो उधारो संगठन मा निर्भर गर्दछ।
3. एक नयाँ देय मिति छान्नुहोस्
यो धेरै भुक्तानी को ट्रयाक राख्न को लागी मुश्किल छ यदि उनीहरु महिना मा फैलिएको छ। राम्रो भुक्तानी प्रबन्ध गर्न को लागी, तपाइँ देय मिति समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँको बिल payday पछि सही कारण हो, यो दायित्वहरु लाई पूरा गर्न र चेक मा खर्च राख्न सजिलो छ।
ढिलो भुक्तानी ब्यूरो जे होस् तपाइँको रिपोर्ट मा सबैभन्दा हानिकारक derogatories छन्। उनीहरु7बर्ष को लागी स्कोर लाई प्रभावित गर्दछ, र त्यहाँ प्रमाणित जानकारी लाई हटाउने कुनै तरीका छैन। उपभोक्ताहरु आफ्नो भुक्तानी संग सावधान रहनु पर्छ, एक गल्ती को रूप मा स्कोर झुकाव हुनेछ।
रिमाइन्डर वा autopay सेट यस्तो missteps बाट बच्न। यदि तपाइँको स्कोर अनुचित छ, मरम्मत को माध्यम बाट रिपोर्टिंग त्रुटिहरु लाई मेटाउनुहोस्। तपाइँ तपाइँको आफ्नै मा विवाद खोल्न वा एक विश्वसनीय एजेन्सी को मद्दत enlist गर्न सक्नुहुन्छ।
ढिलो चरणको विश्वव्यापी महामारीको हवाई यात्रा हुन गइरहेको छ ...
२०२१ IGLTA ३ 2021 औं ग्लोबल कन्वेंशन को लागी सम्मान घोषणा
ट्राभल एजेन्सीहरुको विरोध: इटाली पर्यटन मन्त्री ...
चीन पर्यटन रिपोर्ट २.2.36 बिलियन घरेलु यात्रा मा ...
सिड्नीमा हिंसात्मक सडक प्रदर्शन र ...
दक्षिण पश्चिम एयरलाइन्स नयाँ कार्यकारी उपाध्यक्ष घोषणा ...
फिजी डिसेम्बर २०२१ सम्म पर्यटन खुल्ने दिशामा धकेलिएको छ
२१ शीर्ष २ of मध्ये २१ अमेरिकी होटल बजार उदासीनता वा ...
थाईल्यान्डले विदेशी पर्यटकलाई खोप्न फुकेतलाई फेरि खोले ...
गुआमको आकाश आतिशबाजी र ड्रोनको साथ उज्यालो हुनेछ ...
वाशिंगटन डीसी क्यापिटल हिल खाली भएपछि ...
टर्क र क्याकोस टापु अपडेट TCI आश्वासन यात्रा ...
ईतिहासको सब भन्दा ठूलो अर्डर: युनाइटेडले २ Bo० बोइंग र ...
कसरी अमेरिकीहरु नयाँ नियमहरु को तहत क्यानाडा यात्रा गर्न सक्छन्?
२०२१ क्यारिबियन पर्यटन: पेट पञ्च भयो
प्राग बिमानस्थल बोर्ड को नयाँ अध्यक्ष चुने
सेशेल्स टुरिज्म २०२१ आगमन प्राप्त गर्न ट्र्याकमा ...
टोक्यो ओलम्पिक गाउँमा पहिलो COVID-19 मामला रिपोर्ट गरियो
भारतमा इ-टूरिस्ट भिसा दिनुहोस् अब पूर्व IATO लाई आग्रह गर्दछ ...
एस्वातिनी सेना प्रभारी जबकि SADC वार्ता हुन सक्छ ...
TLEE स्पा नवीनतम परियोजना अनावरण: Willowbrook स्पा मा ...
Sk Asial एशिया राष्ट्रपति: उम्मेदवार एन्ड्र्यू जे। वुड भेट
कतार एयरवेज आईएटीएको टर्बुलेन्स अवेयर प्लेटफर्ममा सामेल हुन्छ
IATA: यात्रुहरू विश्वास सुरक्षा जहाज, सुरक्षा ...
ताइवान पर्यटकहरूको लागि गुआममा भ्याकेसन र खोप
बैंकक बाट सामुई, चियांग माई, फुकेत को लागी उडानहरु ...
एक जागिर पाउनुहोस्: डेनमार्कले आप्रवासीहरुलाई कल्याण को लागी काम गर्न भन्छ ...
अपरिवर्तनीय घाटा: लिभरपूलले युनेस्को विश्वलाई हटायो ...
खोप पर्यटन: यो राम्रो, नराम्रो वा उदासीन छ?
अमेरिकी एयरलाइन्सले पहिलो प्रत्यक्ष मियामी घोषणा गर्‍यो ...
धेरै जसो हवाई पर्यटकहरू COVID-19 बिरूद्ध पूर्ण खोप लगाउँदछन्
युगान्डा हाइड्रो बाँध: नयाँ पर्यटन पहुँच
आईसीएओ कतरको कन्ट्रोलको प्रस्ताव लाई नियन्त्रणमा राख्छ ...
हवाईमा Del०,००० यात्रुहरूको रूपमा डेल्टा संस्करण भरी ...
COVID-१ p महामारी प्रीमियम पासपोर्टको शक्ति ईरोड गर्दछ
ब्रिटिश एयरवेज उडानहरू लन्डन हीथ्रोबाट सेन्टसम्म ...
आईएटीएले ग्लोबल मोबिलिटी एड्स कार्य समूह सुरू गर्यो